Waare “Waxaa nalagu xantaa inaan u dhownahay dowladda laakiin waan ku faaneynaa. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waare “Waxaa nalagu xantaa inaan u dhownahay dowladda laakiin waan ku faaneynaa.
Waare “Waxaa nalagu xantaa inaan u dhownahay dowladda laakiin waan ku faaneynaa.
Madaxda saddexda maamul goboleed ee kala ah Koonfur-Galbeed, Hir-shabeell iyo Gal-Mudug ayaa shir wadatashi ah ku yeeshay magaalada Baydhabo, ka hor inta aysan usii gudbin magaalada Muqdisho, oo ay uga qeyb gali doonaan shirka hoggaamiyeyaasha shanta maamul goboleed iyo federaalka Soomaaliya.
Shirka lagu qabtay Baydhabo, oo ay ka hadleen Cabdicasiis Xasan Maxamed “Lafta gareen”, Maxamed Cabdi Waare iyo Axmed Cabdi Kaariye “Qoor Qoor”.
Madaxweynaha Galmudug – oo marti galiyay shirkii khilaafka abuuray ee Dhuusamareeb 3 – ayaa sheegay in sababta ay hadda Muqdisho u tageen ay tahay dhammeystirka wixii kasoo baxay shirkaas.
“Waxaad ogtihiin in Dhuusamareeb 3 ay ku dhammaatay go’aamo dhaxalgal ah, fakar kastoo la kala qabayna la isu tanaasulay. Doorasho xalaal ah, dhinac jirin inay kasoo baxday, waxaan sidoo kale halkaas ku caddeynay in walaalihii ka maqnaa ama walaal kasta oo talo haya inay taladiisu u furan tahay.” Ayuu yidhi.
‘Waxaan hadda u soconnaa dhageysiga walaalihii maqnaa”
“Dhuusamareeb 3 waxaa kasoo baxay guul, wax walba oo la jahwareeriyayna ku hareen, haddana sidaan horay u sheegnay aan u soconno dhammeystirkeeda iyo in aan dhageysanno walaalihii ka maqnaa,” ayuu yidhi Qoor Qoor.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in mar walba lagu xanto inay u dhow yihiin dowladda dhexe, “laakiin taas ayba wax fiican u arkaan”. “Annaga waxaa nala yidhaahdaa dowladda ayey wadashaqeyn dhow la leeyihiin, waan ku faaneynaa in Soomaali wadashaqeyn leedahay. Kuma faaneyno dowladda ayaan ka fognahay, waxaan ku faaneynaa inaan cid walba u dhownahay isna fahansan nahay.”
Dhanka kale wuxuu Qooq Qoor su’aal iska weydiiyay sababta ay hoggaamiyeyaashii ka maqnaa Dhuusamareeb 3 uga qeyb galayaan shirka Muqdisho, iyadoo aan la fulinin shuruudihii ay markii horeba soo jeediyeen.
“Walaalihii naga maqnaa shirkii Dhuusamareeb 3 waad ogtihiin inay nooga maqnaayeen ‘iyadoon Ra’iisul Wasaare la magacaabin meelna tagi meyno’, hadde Ra’iisul Wasaare lama magacaabine, saaxiibbadeenna way yimaadeen, marka ma waxaan nidhaahnaa Dhuusamareeb baa la diiddanaa mise waxaan nidhaahnaa walaaleheen waxay qiran la’yihiin inay ilduufeen?” Ayuu yidhi Qoor Qoor.
Maxamed Cabdi Waaare, oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Hir-Shabeelle, oo shirkii Baydhabo ka hadlay ayaa sheegay in dhinacyada aysan aad u kala fogeyn.
“Haddi iyo talo haddey joogto, saaxiibbadeen maba kala fogin, ayagaa yidhi ‘gogoshii ma la xidhin cid xidhi kartana ma jirto’, annaguna idinkama xidhine, hadda ha dhihina meel kale halloo raro”. Ayuu yidhi Waare.
Madaxweynaha Koonfur-Galbeed, Cabdicasiis (Lafta gareen) ayaa shirka Baydhabo maanta ka dhacay ku tilmaamay mid ay si gaar ah ugu tashanayeen saddexda maamul goboleed ee kala ah K/Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug.
“Waxa ugu horreeya ee aan ka tashaneyno waa amniga. Waad ogtihiin dhibka ay nagu hayaan kooxaha argagixisada, waxaana loo ballamay in wasiirrada amniga ee saddexda maamul goboleed ay shir noo furaan bisha October,” ayuu yidhi Lafta Gareen.
Madaxtooyada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in shirka dowladda dgexe iyo maamul goboleedyada uu Muqdisho ka furmi doono barrito.
“Waxaa Villa Soomaaliya ka furmaya Khamiis, 10ka Sebteembar shir ay u dhanyihiin Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, kaasoo lagu dhammeystirayo hanaanka doorashooyinka dalka, iyadoo uu saldhig u yahay heshiiskii Samareeb-3.” Aayaa lagu yidhi qoraal uu Facebook soo dhigay Agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaalia.
Madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa Muqdisho, halka galinkii dambe ee maantana ay caasimadda gaadheen madaxda saddexda maamul goboleed ee ku shirsanaa Baydhabo.
Previous articleCabdirisaaq Xuseen Aadan (Caato) oo maalmo kadib markale loo magacaabay xoghayaha joogtada ah ee xafiiska Ra’iisul wasaaraha,
Next articleDowladda Maraykanka oo diyaarinaysa ciidamo Soomaali ah oo habaysan, si ay hoos ugu dhigto saamaynta Dowlada Turkiga Somaliya.
Alshabaab oo la sheegay in Deegaano.Muhiim ah lagala wareegay
Waqtiga Codka loo qaadaayo Wasiirada Rooble uu magacaabayo oo la sgaaciyey
Olalahii Doorashada Soomaliya oo Dalka Dibadiisa Xoowli uga socda
The dismissal of the Chief Justice of the Supreme Court has...
President Farmajo asked about the troops he will withdraw from Gedo...
Breaking newsThree regional administrations allied with Farmajo’s government open a conference...
Cumar Filish oo u jawaabay xildhibaanno ka horyimid go’aankii metalaada G/Banaadir
Madaxweyne Farmaajo oo ka codsaday Golaha Shacabka Ansixinta Xukuumadda Ra’iisul Wasaare...